Soo-dejinta Yakovlev Yak-40 FSX & FSX-Steam - Rikoooo
downloads 19 825
Igor Suprunov (Naqshaday Suprunov) FSX xirxiray Andrey Vinogradov
Ka reebban add-on oo tayo sare leh oo qeexitaan sare leh, waxaad ku ogaataa Yakovlev Yak-40 ee noocaan ah FSX iyo FSX-Steam, jilitaanka diyaaradaha waa mid aad u sarreeya taas oo ka dhigaysa mid aad u dhib badan oo novices ah, buugga ayaa ah bogagga 123 (PDF) wuxuuna noqon doonaa lagu rakibay on your desktop. qol The dalwaddii (VC) waxa si buuxda u qaabeeyey in HD la aaladaha Ruush 3D.
Ruush add-ons waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu fiican ee jira mana aha wax aan jirin, barnaamijyaqaannada Ruush-ka ama barnaamijyadeena Ruushka ayaa jecel xaqiiqada iyo tafaasiisha, si aannu ugu faraxno.
Waxaa lagama maarmaan ah in la akhriyo waraaqo ka hor isku dayay diyaarad (diyaarad mar walba bilaabataa matoorada off), Iyo nasiib wanaag dukumentiyada waa in English / Ruush.
Tani waa pack a complete leh dhawaaqyada caadada, HD VC, aaladaha caadada, buugga, repaints 14 iyo wax ka badan.
DIGNIIN KU SAABSAN, waxaa lagula talinayaa inta lagu jiro duulista haddii aad u beddelato duullimaad kale FSX way burburayaan, markaa fadlan fahanto in mar duulimaad ah, ma beddeli kartaan adiga oo aan khasaare dhicin. Si kastaba ha noqotee, tayada ee add-on ayaa dhaaftay dhibaatada.
Rinjiyeeyeen ka mid Aeroflot, Air Enterprise Bryansk, S7, KrasAir, UTAir, Life, Usbeek, Yamal, Service Yak, Sukhoi, Poland Air Force, Gazprom, Czechoslovak Airlines, Uzbekistan Airways.
The Yakovlev Yak-40 waa diyaarad yar oo saddex-engined gobolka gaadiidka ee bulshada Soviet iyo Ruush Yakovlev. Its taariikhda ugu horeysay horyaalka ee 1966. Waxaa la wakiishay September 1968 by Aeroflot.
xawaaraha ugu badan: 550 km / h
Miisaanka: 9400 kg
Distance mari karo 1 800 km
The Raven: 25 m
qiimaha Unit: 60 000 in 210 000 USD
duulimaadka First: October 21, 1966
Qore: Igor Suprunov (Naqshaday Suprunov) FSX xirxiray Andrey Vinogradov